प्रचण्डलाई १२ लाख मिनाह
काठमाडौं । महशूल नतिरेको भनेर ९० वर्षकी पूर्व मुमाबडामहारानीको घरको बत्ती, पानीको लाइन काट्ने सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासले तिर्न बाँकी १२ लाख ५० हजार महूल मिनाह गरेको खबर छ ।
यो कुन प्रकारको सुविधा हो, राजनीतिक प्रभावमा हुने भ्रष्टाचार हो कि होइन ? कमजोरलाई कानुन र शक्तिशालीका लागि अवसर । लोकतन्त्रको यो भद्दा मजाकले नेपाल सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ । यद्यपि ठूला नेताहरु लोकतन्त्रलाई भागबण्डातन्त्र बनाइरहेका छन्, शायद यही हो लखनौं लूट ?
अहिले पनि विद्युत प्राधिकरण र खानेपानीको अड्डामा जाने हो भने महशूल तिर्न बाँकी कति छन् कति ? तिनीहरुमाथि खोई कारवाही हुनसकेको ? बक्यौता उठ्ती गर्ने हो भने अरवौं उठ्न सक्छ, योजनामा लगानी गर्न पनि सकिन्छ । तर राजनीतिक दबाब, प्रभाव र पहुँचका आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार दिनदिनै बढ्दै गएको छ, जसले कानुनलाई कमजोर पारिरहेको देखिन्छ । कानुनको राज, स्वराज स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरु नै लागेका छैनन् भने यिनले संविधान कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर गरेको प्रतिवद्धताको ओजन छ र ? हौवाले लोकतन्त्र कसरी मजबुत होला र ?